Candy · Jolay 2012 · Global Voices teny Malagasy
Candy · Jolay, 2012
Lahatsoratra farany an'i Candy tamin'ny Jolay, 2012
Pero: Miomana Ho Amin'ny Lalao Olaimpika 2012 Any Londona
Amerika Latina24 Jolay 2012
Andro vitsy monja mialoha ny hiantombohan'ny Lalao Olaimpika 2012 any Londona, maneho hevitra ireo Peroviana mpampiasa aterineto momba ity hetsika ara-panatanjahantena lehibe ity.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana24 Jolay 2012
Yemen: Fampirantiana “Yemen Avy Amin'ny Maso Tavoahangintsika”
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana22 Jolay 2012
Afrah Nasser, Yemenita mpanao gazety sady mpitoraka blaogy dia mampiasa ny fampielezam-baovao sosialy mba hanangonam-bola hanaovana fampirantiana sary any Stockholm, Soeda. Fantaro ny fomba ahafahanao manampy an'i Afrah hanatanteraka ny asany sy anohanana ireo mpaka sary Yemeni mampiseho ny asany sy ny talentany.
Maoritania: Kolontsaina Manan-karena Lalao, Dihy ary Mozika
Maoritania dia mitoetra amin'ny toerana ifanenan'ny kolontsaina Arabo sy Afrikàna; izy no mampifandray ireo firenena any Avaratra sy Andrefan'i Afrika. Nanome azy toetra manokana izany, Hita mibaribary izany amin'ny fomban-drazana ao Maoritania manan-karen-dalao, dihy ary mozika. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia omenay ohatra vitsivitsy ianao.
Amin'ireo mpanao mozika Japoney liana amin'ny mozika Venezoeliana, Yoko Yoshizawa sy Mika no miavaka amin'ny fitendrena ny "harpe" Venezoeliana.
Espaina21 Jolay 2012
Angola, Sina: Miresaka Momba Ny Fampandrosoana Vaovao “Tanàna Maty” Ireo Mpampiasa Aterineto
Afrika Mainty20 Jolay 2012
Nampiditra orinasa Shinoa ny governemanta ao Angola mba hanangana tranobe lafo dia lafo miisa 750 ao Kalimba, eo ho eo amin'ny 30 kilometatra ivelan'i Luanda. Na dia eo aza ny fananana harena an-kibon'ny tany, dia olona maro ao Angola no miaina ao anaty fahantrana tanteraka ary tsy mahatakatra ny vidin'ireo...
Syria/Torkia: Manao Fihetsiketsehana Noho Ny Tsy Fahampian-drano Ao Amin'ny Tobin'i Kilis Ireo Syriana Tsy Manan-kialofana
Nanao fihetsiketsehana nanohitra ny tsy fahampian-drano ireo tsy manan-kialofana Syriana ao amin'ny Tobin'ireo Tsy Manan-kialofana ao Kilis, any amin'ny sisin-tany Syriana sy Tiorka. Polisy miisa efatra sy tsy manan-kialofana miisa telo no voalaza fa naratra.